Uzophonsa inselelo kuZuma uMotlanthe | Isolezwe
Uzophonsa inselelo kuZuma uMotlanthe
Isolezwe / 13 December 2012, 12:16pm /
Mnuz Kgalema Motlanthe
ISINQUMO sePhini likaMengameli, uMnuz Kgalema Motlanthe, sokungenela ukhetho lobumengameli ku-ANC libangisana noMengameli Jacob Zuma sizobe seyeme ekutheni ulandela imigomo hhayi ngoba ehlose ukunqoba ukhetho.
Izolo ebusuku, ngokombiko weSapa imisakazo emithathu, iSafm, Jacaranda News ne-Eye Witness News ikuqinisekisile ukuthi uMotlanthe uzomphonsela uZuma inselelo.
Nemithombo engaphakathi ku-ANC izolo ithe uMotlanthe uvumile ukungenela ukhetho futhi useyazisile ikhomishini yokhetho kwi-ANC.
Abekhomishini kuthiwa bacacisile ukuthi akufanele akhulume esidlangaleni ngalokhu kuze kube yilapho bememezela bona abazongenela izikhundla ngoba lokho yilungelo labo. Ikhomishini kubhekwe ukuthi ikuveze lokhu esithangamini sabezindaba namuhla.
Umgcinimafa we-ANC, uMnuz Mathews Phosa, ukuqinisekisile izolo ukuthi uzongenela noma yikanjani ukuqokelwa isikhundla sePhini likaMengameli azosibanga noMnuz Cyril Ramaphosa ophakanyiswe yilabo abeseka uZuma.
NoNgqongqoshe wezeMidlalo, uMnuz Fikile Mbalula, uthe uyasemukela isiphakamiso sokungenela isikhundla sikaNobhala we-ANC esiphethwe nguMnuz Gwede Mantashe.
Yize labo abakhankasela uMotlanthe bezishaya isifuba ngokuthi bazonqoba kodwa izibalo zikhombisa ukuphikisana nabo.
Usolwazi Steven Friedman, ongumqo-ndisi eCentre for the Study of Democracy, uthe uMotlanthe usekwenze kwacaca akufunayo.
Uthe uMotlanthe usethathe isinqumo sokuthi asikho isidingo sokuthi angaze abanjwe ngobhongwane ngenxa nje yesikhundla sokuba yiPhini likaMengameli.
UFriedman ubona ukuthi uMotlanthe uncamele khona ukuthi angenele esobumengameli isikhundla. Lokhu ukwenza ngoba ekholelwa ukuthi uma ngabe umholi sekuphakanyiswe igama lakhe ukuthi angenele isikhundla kumele akuhloniphe lokho asingenele.
Uthe kuyacaca ukuthi uMotlanthe usezidelile ukuthi angabi naso isikhundla kubaholi abayisithupha abaphezulu kwi-ANC eminyakeni emihlanu ezayo ngethemba lokuthi ngengqungquthela elandelayo uyobuya khona njengokugiya.
Okunye okuhlale obala ukuthi imizamo yokufinyelela esivumelwaneni ngendaba yobuholi kule ngqungquthela phakathi kwethimba elikhankasela uZuma noMotlanthe ifadalele.
UFrieman uthe uma uMotlanthe ebevumile ukuthi aqhubeke elinye ihlandla eyiPhini likaZuma lokho bekuyosho ukuthi ngeke akwazi ukwenza ngokuthanda kwakhe.
Uma kwenzeka uMotlanthe lumshaya ukhetho kwesobume-ngameli kungenzeka angenele isikhundla sePhini likaMengameli kwazise sikhona isifundazwe esiphakamise igama lakhe okuyi-Northern Cape lapho ayobe esencintisana khona noRamaphosa.
Nakho lokhu kubonakala kungeke kumsize ngoba ziningi izifundazwe eziphakamise igama likaRamaphosa kwesePhini likaMengameli okungaba wumqansa ukuthi aziguqule umqondo.
Abeseka uMotlanthe bathi kuzophenduka amatafula eMangaung akuzofana nezingqungquthela zezifundazwe ezikhombise ukuvuna uZuma.
UZuma wesekwa yizifundazwe eziyisithupha ngaphandle kweLimpopo, Western Cape naseGauteng. Kanjalo ne-ANC Youth League ifuna uMotlanthe ahole uKhongolose emva kwale ngqungquthela.
USihlalo we-ANC eGauteng uMnuz Paul Mashatile, ogcwele ukuzethemba, uthe bonke abantu ababaphakamisile bazolungenela ukhetho eMangaung.
“Asikhathazekile ngokuthi zibukeka kanjani izinombolo njengamanje kodwa sisebenza phezu kwesisekelo sokuthi bazolungenela ukhetho,” kusho uMashatile.
EGauteng uMotlanthe uthole ukwesekwa ngamavoti angu-238 kunoZuma obe nangu-173. Lesi sifundazwe sifuna uMotlanthe abe nguMengameli, iPhini lakhe kube nguMnuz Tokyo Sexwale kuthi uNobhala-jikelele kube nguMantashe.